Xukumaha Ex-Financial: Waxaan jeclaan lahaa in aan maal lahaa Seeraar markii aan qof walba u sheegay inay taxaddar
jaangooyaha hore ee maaliyadda Bart Chilton rabo uu maal Seeraar oo kale cryptocurrencies caan dib markii uu u sheegay in qof walba si taxaddar.
Chilton ayaa sheegay in ay weli ku “Wild West” ka baxsan suuqa mustaqbalkooda nidaaminaya, laakiin daray ee isbedbedelka qiimaha weyn tan “bedeley baxay.”
Japan ayaa Fisco dhawaaqay launch of fund cryptocurrency
Japanese adag cilmi maalgashiga iyo operator sarrifka Seeraar Fisco ayaa ku dhawaaqday in ay bilaabi doonto fund cryptocurrency a.
Imaatinka ka dib markii shirkadda soo saartay dhigaalka Seeraar sanadkii la soo dhaafay, fund crypto cusub ka badan maalgelin doonaa 300 milyan oo yen ($2.66 million) in Seeraar iyo lacagaha kale ee digital, sida ay Nikkei.
fund ayaa sheegtay in ugu horeeyay ee noociisa ah ee Japan.
Sharci-dajiyayaasha Arizona bandhigo biilka in ay oggolaadaan in muwaadiniinta in ay bixiyaan canshuur la Seeraar
Biil cusub oo loo gudbiyay Senate Arizona lahaa, hadii la ansixiyo, u oggolaan in dadku ay u bixiso deymaha canshuurta gobolka iyagoo isticmaalaya Seeraar ama kale cryptocurrencies.
diiwaanka Public muujinaya in biilka - maalgaliyo by Senator gobolka Warren Petersen iyo wada maalgaliyo by saddex xildhibaan oo kale - waxaa loo soo gudbiyey si loogu tixgeliyo on Jan. 9. Waxaa tan loo gudbiyey Guddiga Arizona hoosaadka Senate for wadatashi dheeraad ah.
Sida laga soo xigtay qoraalka, qiyaastii ogolaan lahaa isticmaalka “albaab lacag, sida Seeraar ama cryptocurrency kale, iyadoo la isticmaalayo nidaamka isku faca-fadeed” si ay u bixiso “canshuurta iyo dulsaarka kasta iyo ganaaxyada” lahaa in dowladda gobolka.
Sharci-dajiyayaasha Arizona ay u guureen ansixiyo biilka la xiriira casriga ah ee la soo dhaafay. guga la soo dhaafay, dejinta dhameystiray biil in aqoonsan saxiixyada blockchain iyo heshiisyada smart sida sax ah sharciga gobolka. Gov. Doug Ducey saxiixay qiyaastii sharci March ee la soo dhaafay.
xoreeyo. adeegga horjoogayaal ah ayaa qorshaynaysa in ay xaraashi 3,813 bitcoins
xoreeyo The. Adeegga horjoogayaal xaraashi doonaa 3,813 bitcoins qabtay oo xidhiidh la leh federaalka, bulshada iyo xaaladaha maamulka. lacagta birta ah waa qiimihiisu ku dhow $54 million at qiimaha hadda.
xaraashka by the Department of Justice hay'adda dhici doona inta lagu jiro mudada lix saacadood ah on Jan. 22. bitcoins waxaa la siin doonaa for sale in 11 blocks, ugu weyn ee kaas oo ku jiri doona 813 bitcoins. Ka qaybgalayaasha waxaa looga baahan yahay in ay sameeyaan deebaaji ah $200,000, hay'adda ku yiri hadal uu Thursday.
US Senate si uu u qabto cryptocurrencies shirka hadlayaan
xoreeyo The. Senate ee adeegyada maaliyadeed guddi qaban doona dhageysi bisha soo socota la nidaamiyo suuqyada sare ee dalka si ay uga wadahadlaan Seeraar iyada oo welwel laga soo baxdayna waxay ku cryptocurrencies khatarta keeni in nidaamka maaliyadeed, qof aqoon toos ah arrinta u sheegay Reuters.
Guddiga Banking Senate waxay qaadan doontaa marag ka Guddoomiyaha Guddiga Trading Badeecadda Futures Christopher Giancarlo iyo Guddoomiyaha Guddiga Securities and Exchange Jay Clayton horraantii February, isha ku yidhi.
Russia Fiienaada biilka cryptocurrency: dhaafsi la ansixiyey oo keliya loo oggol yahay
Russia ee Wasaaradda Maaliyadda dhigi dheeri ah biilka cryptocurrency sharciyeynta doonaa, taas oo u oggolaan doonaa Ganacsi hantida sida kaliya ee gaar ah “rasmiga ah” is-weydaarsiga.
Wasiir ku-xigeenka Maaliyadda Alexei Moiseyev sheegay RN.
Liiska dhaafsi rasmiga aan weli la ansixiyay, waxaa weli “wada hadlay”.
Moiseev xaqiijiyay in wasaaraddu ma dooneysid in aad xaddiddo wareejinta lacagta crypto jira, laakiin filan in ay ku riday “nooc ka mid ah qaab ".
“Yaa crypto-lacagaha, waxba ma uu noqon doono. Laakiin soo iibinta iyo sale bartey kuwo lagu jaangooyay doonaa. Fikradda guud waa in ay lagama maarmaan tahay in la iibsado iyo iibiyaan hantidooda on dhaafsi rasmiga ah noqon doono iyo waxa lagu dhawaaqi doona, sharciyeysan.”
alexey Moiseyev – Wasiir Ku-xigeenka Maaliyadda
Wasaaradda Maaliyadda soo bandhigay xeerka qabyada ah ee Crypto lacagta ee December 2017, dokumentiga loo gudbin doonaa Duma State ee February 2018. Wasaaradda ayaa aaminsan in crypto-lacagaha waa in la tixgeliyaa hantida, lacag, iyo macdanta – hoos qeexidda hawlaha ganacsiga la canshuurta gaar ah.
Arkansas ugu horeeyay Seeraar ATM
In Arkansas’ dhismaha ugu dheer ku fadhiya mishiinka Seeraar ugu horeysay ee gobolka.
Mashiinka ayaa barbaro dareenka tan iyo bishii November markii lagu meeleeyay Store Corner oo More dabaqa dhulka ee 40-sheekada Simmons Tower ee badhtamaha magaalada Little Rock.
“Waxaan helay badan oo lug ah la,” ayuu yiri maamulaha dukaanka Connie Davis.
Mashiinka waxaa iska leh Freedom quful Inc., taas oo uu leeyahay xafiis dhow Tower Simmons ah.
Chris Sweeney, co-aasaasaha iyo madaxa maamulka sare ee Freedom quful Inc., iyo K.C. Surrett, Madaxweynaha iyo sarkaal dhaqaale oo madax, ayaa sheegay in ay qorshaynayaan in ay ku rakibi 10-15 mashiinada dheeraad ah ee Waqooyi-galbeed Arkansas, Fort Smith, Jonesboro iyo meelaha kale ee iyo nawaaxigeeda ee Arkansas.
“Waxaan qabaa aragtida caanka ah waa in ganacsiga mustaqbalka xasilin qiimaha,” Sweeney ayaa sheegay in.
“Waa sida sharciga ah sida laga xoreeyo. lacag,” ayuu sheegay Duszota, a nin Arkansas degaanka, macaamiisha Seeraar ATM ah oo lagu waraystay goobta.
South Korea: No qorshaynaysa in ay mamnuucaan cryptocurrency
Isbuucaan, dhowr warbaahinta caadiga ah ayaa sheegay in dowladda South Korean ayaa qorshaynaysa in la mamnuuco ganacsiga cryptocurrency. Taasi dhab ma aha kiiska, sida biilka u baahan tahay in ay gudbaan kulan ugu horeysay ka hor inta la qaadi karo dhaqan galay.
Sida uu ku sameeyey tan iyo December 13 of 2017, Wasaaradda Korea South waxaa kaliya isku diyaarineysa biil in ay xirto la Dumin lahaa is dhaafsi cryptocurrency qaarkood. Waxaa la ma qorsheynayo in la mamnuuco ganacsiga cryptocurrency ee muddada gaaban.
Haddii dowladda South Korean loogu tala galay in la mamnuuco ganacsiga cryptocurrency, waxaa sidaa la samayn lahaa on December 13, halkii ay ka sii daayo Qaababka kala duwan ee wax go'aamiya, in ka mid ah in laga mamnuuco cryptocurrencies ajaanibta ganacsiga.
CCN shaaca ka qaaday in afar shuruuc waaweyn ee dowladda South Korean ayaa la filayaa in ay hirgeliyaan by January 20:
– Looga hortago maal lana ka qabashada khasaaraha dhex cryptocurrencies aadka u kacsan.
– Looga hortago is dhaafsi cryptocurrency adag nidaaminaya ka hawlgala dhufto ee sida kuteen ee maalgashadayaasha lana siiyo.
– bangiyada Codsiga iyo is dhaafsi si loo hubiyo in maal-underaged iyo shisheeyaha kartaan xisaabaadka ganacsi ma furan is dhaafsi cryptocurrency.
– Ku meel gaar ah joojin maal hay'adaha iyo maal tafaariiqda ka maalgashiga cryptocurrencies.
Korean Wasaaradda South The of Strategy iyo Maaliyadda adkeeyay in uusan ku raacsanayn soo jeedinta Wasaaradda Caddaaladda ma.
"Ma wadaagaan views mid ah sida wasaaradda caddaaladda on ganaax sarrifka cryptocurrency iman kara,"MSF ayaa sheegay in.
cad, Hindisaha ganacsiga cryptocurrency xayiraadda aan la dhamaystirin ama xitaa isku raaceen Korea Wasaaradda South of Strategy iyo Maaliyadda.
Post Previous:Blockchain News 10 January 2018
Post Next:Seeraar Hardforks waa maxay haddayan?